Seces, Antananarivo : “minisitera telo nanao fihetsika mamohehatra” | NewsMada
Seces, Antananarivo : “minisitera telo nanao fihetsika mamohehatra”
Nanao fanambarana ny eo anivon’ny Sendikàn’ny mpampianatra mpikaroka (Seces), sampana Antananarivo ny faran’ny herinandro. Nivoitra tamin’izany ny filazana ny tsy fandehanan’ny raharaham-pirenena. Tsy afa-bela ny minisitera telo…
”Afa-baraka sady mitsanga-menatra ny firenena malagasy noho ny afitsok’ireo sasantsasany mpindrana fahefana amin’ny vahoaka. Misy ny minisitera telo miantoka ny fiandrianam-pirenena no nanao fihetsika mamohehatra sy tsy fampiseho masoandro”, hoy ny fanambaran’ny Seces, sampana Antananarivo, ny faran’ny herinandro teo. Teo ny fanapahana ny karaman’ny mpiasam-panjakana, ny faran’ny taona 2017 sy ny fiandohan’ny taona 2018.
Teo ny fanambarana fahatany ny tetiandrom-pifidianana nataon’ny minisitry ny Raharaham-bahiny tany ivelany, tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy. Toy izany koa ny raharaha maha voatohintohina ny tomponandraikitra ambony, izay tokony hiaro ny marina sy ny fitombokasem-panjakana voatonontonona amina raharaha kolikoly avo lenta. Tsy latsak’izany ny fandanian’ny depiote ny volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana, nampisy fiampangana ho nahitana fizarana kolikoly farany teo.
Ilaina ny fikaonan-doham-pirenena
“Tsy hitondra filaminana eto amintsika ny fifidianana, atao miainga amin’ny lalàm-pifidianana tsy ifanarahan’ny rehetra”. Ilaina ny fifanakalozan-kevitra amin’ny alalan’ny fikaondoham-pirenena handravonana ny toe-draharaha, izay tokony handraisan’ny vahoaka anjara.
Antsoiny ny Malagasy rehetra hampanjaka hatrany ny fahamarinana, hitandrona ny firaisankinam-pirenena sy ny fiasana ho fanoitran’ny fampandrosoana. Tsy firenena voaozona ho anisan’ny mahantra indrindra i Madagasikara; tsy natao ho tobibe famaharan’ireo vahiny, na fakana akora fototra izany na fanaovana rapadango ireo otrikarena tsy hita noanoa.
Masi-mandidy amin’ny tany ny vahoaka malagasy
“Masi-mandidy amin’ny tany ny vahoaka malagasy”, hoy ihany ny Seces, Antananarivo. Koa rariny sy hitsiny raha mba hiaina an-kalalahana tsy misy raorao eto amin’ny Nosy. Melohiny ireo tsy fahombiazana marobe ataon’ny fitondrana amin’izao: ny tsy fandriampahalemana manerana ny Nosy, efa lasa andavanandrom-piainan’ny vahoaka malagasy na an-tanàn-dehibe na ambanivohitra. Miampy fitsaram-bahoaka izany. Eo koa ny hetraketraka ataon’olom-bitsy, ny fanararaotam-pahefana isan-karazany, ny fandrobana ny harem-pirenena, ny fakana ankolaka na mivantana ny tanin’ny Malagasy.